निफ्राको सेयर कारोबारमा आज भएको के हो? :: कमल नेपाल :: Setopati
निफ्राको सेयर कारोबारमा आज भएको के हो?
बुधबार सेयर कारोबारका बेला सिस्टमले निफ्राको सेयर मूल्य १ सय प्रतिशतले घटेको देखायो।
१ सय प्रतिशतले घटेको देखिए पनि मूल्य भने हिजोकै ५९४ रुपैयाँ देखियो। निफ्राको सेयरमा मात्रै होइन, समग्र परिसूचक नै त्रुटिपूर्ण देखियो।
सेन्सेटिभ सूचक हरियाे हुँदा नेप्से परिसूचक भने ६० अंकले घटेको देखियो। सामान्यतः नेप्से र सेन्सेटिभ सूचकबीचको अन्तर त्यति ठूलो देखिँदैन। यति मात्रै होइन, टिएमएस सिस्टमबाट निफ्राको सेयर खरिद वा बिक्री गर्न अर्डर हाल्न पनि लगानीकर्ताले पाएनन्।
सेयर किन्न वा बेच्न चाहनेले ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) बाट आफ्नो अर्डर पोष्ट गर्छन्। किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षको अर्डर म्याच भएपछि कारोबार सम्पन्न हुन्छ। टिएमएसमा लगानीकर्ताले कारोबार गर्ने कम्पनी 'निफ्रा' छनौट गर्दा कम्पनी नै देखिएन। निफ्राको सेयर किन्न वा बेच्न तयार रहेका हजारौं लगानीकर्ता मारमा परे।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले निफ्राको सेयर कारोबारमा समस्या आएको स्वीकार गरे।
'सो कम्पनीको कारोबारमा समस्या देखिएको छ, हामी सुल्झाउनतिर लागेका छौं,' सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने। उनका अनुसार समस्या पहिचान भइसकेको छ। निफ्राको सेयर कारोबारमा समस्या देखिएकै कारण सो कम्पनीको कारोबार केही बेर स्थगित भयो।
सो कम्पनीको कारोबार स्थगित भए पनि अरू कम्पनीको सेयर किन्न वा बेच्न चाहनेले अरूबेला जस्तै टिएमएसबाट आफ्नो अर्डर पोस्ट गर्न सक्ने नेप्सेले जनाएको छ।
निफ्राको हिजो कारोबार बन्द हुँदा मूल्य प्रतिकित्ता ५९४ रूपैयाँ कायम भएको थियो। एक प्राविधिकका अनुसार सिस्टमले आज कारोबार खुल्दा त्यो कम्पनीको अन्तिम बजार मूल्यलाई ५९४ रूपैयाँ देखाउनुपर्नेमा 'जिरो' कायम गर्‍यो।
बिक्री अर्डर अत्यधिक हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए।
निफ्राकै कारण नेप्सेको घटेको सूचक बढी देखिएको उनले बताए। आजको कारोबार बन्द भएपछि भने वास्तविक तथ्य देखिने उनको दावी छ। समस्या देखिएपछि केही बेर कारोबार स्थगित गरिएकै कारण टिएमएसमा पछिबाट लगानीकर्ताले निफ्रा सर्च गर्दा नभेटाएका हुन्।
निफ्रा सेयर बजारमा एक साताअघि मात्रै सूचीकृत भएको नयाँ कम्पनी हो। यसको २० करोड कित्ता सेयर सूचीकृत छ। एउटै कम्पनीको सूचीकृत भएको यो सेयर संख्या सबैभन्दा धेरै हो।
कारोबार सुरू भएदेखि नै उसको बजार मूल्य निरन्तर १० प्रतिशतले बढ्दै गएको थियो। हिजो मंगलबार एक्कासि मूल्य १० प्रतिशतले नै घटेको थियो।
आज बुधबार पनि मूल्य घट्ने संकेत भएका कारण कम्पनीको सेयर बिक्रीका लागि अर्डर पोस्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको र आफ्नो मात्रै अर्डर राख्न मिल्ने बनाएर चलखेल गर्न खोजिँदा समस्या भएको लगानीकर्ताको आराेप छ।
लगानीकर्ता पिताम्बरशर्मा खरेल भन्छन्, 'सिस्टम सञ्चालन गर्नेबाटै सिस्टमबारे धेरै सूचना बाहिरिएका छन्, बाहिरी तत्वले नै यसमा चलखेल गर्न खोज्दा सिस्टममा समस्या देखिएको हो।'
कारोबारका लागि अर्डर पोस्ट गर्ने सिस्टम टिएमएस वाइको कम्पनीले निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीबाट बाहिरी तत्वले सिस्टमबारेको सूचना लिएर चलखेल गर्न खोज्दा समस्या देखिएको केहीको बुझाइ छ। लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सिस्टममा बारम्बार समस्या देखिने गरेको बताउँदै समस्याप्रति नेप्से गैरजिम्मेवार बनेको टिप्पणी गरे।
'सिस्टममा समस्या देखिएमा तुरुन्तै सबै कारोबार रोकेर समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'अहिलेसम्म पनि समस्याबारे राम्ररी जानकारी दिइएको छैन।'
आजको समस्याबारे विस्तृतमा जानकारी दिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ।
३६ खर्बको पुँजीबजारप्रति नियामकले यति धेरै बेवास्ता गरेकोप्रति उनले आश्चर्य जनाए। नेप्सेको सिस्टममा आएको यो समस्या पहिलो होइन, यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७, ०७:५९:००